ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ တစ်ချို့ game တွေလွတ်မသွားရအောင် ၅ခုလောက်တော့စုပေးလိုက်ပါတယ်။ Gamer အများစုကတော့ ဒီ ၅ခုလုံးမလွတ်တမ်းဆော့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီတစ်ပတ်က Hogwarts မှာကျောင်းတက်နေခဲ့ရတာ ၃ရက်လောက်ရှိပြီမဟုတ်လား။ တစ်ချို့ကအားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
HARRY POTTER : HOGWARTS MYSTARY
Harry Potter လိုပဲ Hogwarts မှာကျောင်းတက်ချင်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။ ၂၅ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Harry Potter : Hogwarts Mystery မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ နေရာကနေ Hogwarts ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Narrative driven ဖြစ်တဲ့အတွက် စာတော့ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ fan တွေအတွက်ကတော့ အနှစ် ၂၀ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတစ်ခုပေါ့။
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး Beer ကို ကိုယ်တိုင်ဖောက်ဖို့ဆိုတာက ဘယ်အချိန်ကတည်းကစိတ်ကူးမိတာလဲ။ ရှိမှာပေါ့ သူများ Home brew ကောင်းကြောင်းကြွားခံခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာ။ Beer ကိုသောက်ဖို့လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူကအများစုဆိုပါတော့။ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်တိုင် Beer ဖောက်ဖို့ မြေနေရာအကျယ်ကြီးရနိုင်ပါပြီ။ ပစ္စည်းအစုံနဲ့ပေါ့။ သိပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ထားတဲ့ game developer ကိုကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ အေးဆေး beer လေးဖောက်ပြီးသာယာချင်တဲ့ gamer တွေအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
[Home page] ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား f2p (free to play) game တွေအားလုံးရဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးကို မယုတ်မလွန်ကူးထားသလိုပါပဲ။ ဒီတစ်ခုက လူတိုင်းအတွက်တော့ ရည်ရွယ်ပုံမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် character အစုံကို အဖွဲ့လိုက်ကိုင်တွယ်ရပြီး game ရဲ့ အခင်းအကျင်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ (ထွက်ထားတာတော့ကြာနေပါပြီ။ အခုမှ update တစ်ခုတက်တာနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။)
Clash of Clans (COC) နဲ့ Mindcraft ပေါင်းထားသလားထင်ရပါတယ်။ ဂိမ်းက tutorial မှာတော့လွယ်လွန်းပါတယ်။ တကယ်နင်လားငါလားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တာကတော့ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ သပ်ရပ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ round တွေမှာ game ထဲကပြန်ထွက်မရတဲ့ bug တော့ရှိနေပါသေးတယ်။
FPS sci-fi shooter တွေက ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ၂လကိုအသစ်တစ်ခု လောက်ထွက်လာနေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ၂လပြည့်ပြီထင်တယ်။ FPS တွေရဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့အချက်က အမြဲတမ်း fast pace ဖြစ်တာပါပဲ။ ခြေမြန်လက်မြန်နဲ့ သွက်သွက်လက်လက် မကစားနိုင်ရင် multiplayer မှာကျန်ခဲ့မဲ့သဘောပေါ့။ sci-fi shooter တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ graphic သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိပါတယ်။ Game element အနေနဲ့ကတော့ အသစ်အဆန်းဘာမှ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ Classic shooter တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာပဲ player တစ်သန်းကျော်ကစားသူရှိထားပါတယ်။ Multiplayer death match တွေနဲ့တော့ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြတာပေါ့ဗျာ။ Play good games and good luck.
ဒီတဈပတျအတှကျတော့ တဈခြို့ game တှလှေတျမသှားရအောငျ ၅ခုလောကျတော့စုပေးလိုကျပါတယျ။ Gamer အမြားစုကတော့ ဒီ ၅ခုလုံးမလှတျတမျးဆော့ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ တကယျတော့ ဒီတဈပတျက Hogwarts မှာကြောငျးတကျနခေဲ့ရတာ ၃ရကျလောကျရှိပွီမဟုတျလား။ တဈခြို့ကအားမှာမဟုတျဘူးလေ။
Harry Potter လိုပဲ Hogwarts မှာကြောငျးတကျခငျြရငျ ဖွဈနိုငျပါပွီ။ ၂၅ရကျနကေ့ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Harry Potter : Hogwarts Mystery မှာဆိုရငျတော့ ကိုယျပိုငျဇာတျကောငျတဈကောငျရဲ့ နရောကနေ Hogwarts ကြောငျးသားတဈယောကျအဖွဈပါဝငျလို့ရနိုငျပါတယျ။ Narrative driven ဖွဈတဲ့အတှကျ စာတော့ဖတျရပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပျခကျခကျခဲခဲတော့ မဟုတျပါဘူး။ fan တှအေတှကျကတော့ အနှဈ ၂၀ စောငျ့ခဲ့ရတဲ့ ကြောငျးတဈခုပေါ့။
ကိုယျအကွိုကျဆုံး Beer ကို ကိုယျတိုငျဖောကျဖို့ဆိုတာက ဘယျအခြိနျကတညျးကစိတျကူးမိတာလဲ။ ရှိမှာပေါ့ သူမြား Home brew ကောငျးကွောငျးကွှားခံခဲ့ရတဲ့အခြိနျတှမှော။ Beer ကိုသောကျဖို့လောကျပဲ စိတျဝငျစားခဲ့တဲ့သူကအမြားစုဆိုပါတော့။ ဒီတဈခါတော့ ကိုယျတိုငျ Beer ဖောကျဖို့ မွနေရောအကယျြကွီးရနိုငျပါပွီ။ ပစ်စညျးအစုံနဲ့ပေါ့။ သိပျပွီး ရှုပျထှေးအောငျမလုပျထားတဲ့ game developer ကိုကြေးဇူးတငျသငျ့ပါတယျ။ အေးဆေး beer လေးဖောကျပွီးသာယာခငျြတဲ့ gamer တှအေတှကျဖွဈပါလိမျ့မယျ။
[Home page] ကိုသှားနိုငျပါတယျ။
တဈခွား f2p (free to play) game တှအေားလုံးရဲ့ အခွခေံအခကျြအလကျတှေ အကုနျလုံးကို မယုတျမလှနျကူးထားသလိုပါပဲ။ ဒီတဈခုက လူတိုငျးအတှကျတော့ ရညျရှယျပုံမရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ character အစုံကို အဖှဲ့လိုကျကိုငျတှယျရပွီး game ရဲ့ အခငျးအကငျြးက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျ။ (ထှကျထားတာတော့ကွာနပေါပွီ။ အခုမှ update တဈခုတကျတာနဲ့ ထညျ့ပေးလိုကျတာပါ။)
Clash of Clans (COC) နဲ့ Mindcraft ပေါငျးထားသလားထငျရပါတယျ။ ဂိမျးက tutorial မှာတော့လှယျလှနျးပါတယျ။ တကယျနငျလားငါလားဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာ မရှူနိုငျမကယျနိုငျဖွဈတာကတော့ အဆနျးမဟုတျပါဘူးလေ။ သပျရပျတဲ့ဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး တဈခြို့ round တှမှော game ထဲကပွနျထှကျမရတဲ့ bug တော့ရှိနပေါသေးတယျ။
FPS sci-fi shooter တှကေ ပုံမှနျဆိုရငျတော့ ၂လကိုအသဈတဈခု လောကျထှကျလာနပေါတယျ။ ဒီတဈခါ ၂လပွညျ့ပွီထငျတယျ။ FPS တှရေဲ့ မပွောငျးလဲတဲ့အခကျြက အမွဲတမျး fast pace ဖွဈတာပါပဲ။ ခွမွေနျလကျမွနျနဲ့ သှကျသှကျလကျလကျ မကစားနိုငျရငျ multiplayer မှာကနျြခဲ့မဲ့သဘောပေါ့။ sci-fi shooter တဈခုအနနေဲ့ကတော့ graphic သပျသပျရပျရပျရှိပါတယျ။ Game element အနနေဲ့ကတော့ အသဈအဆနျးဘာမှ သိပျမတှရေ့ပါဘူး။ Classic shooter တဈခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လောလောဆယျ တဈပတျလောကျအတှငျးမှာပဲ player တဈသနျးကြျောကစားသူရှိထားပါတယျ။ Multiplayer death match တှနေဲ့တော့ ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။
နောကျတဈပတျမှပွနျဆုံကွတာပေါ့ဗြာ။ Play good games and good luck.
Tags HarryPotter Hogwarts
Whisky!! မူမှန်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်...